ISAFA ayinanxa noBaxter okhonjwa kwiChiefs - Impempe
ISAFA ayinanxa noBaxter okhonjwa kwiChiefs
Inhlangano eyengamele ibhola kuleli, iSAFA, ithi yona ayingene ndawo ekutheni uStuart Baxter uyabuya kuleli noma cha. Lo mqeqeshi odabuka e-United Kingdom kulindeleke ajoyine iKaizer Chiefs kuleli viki noma ngempelasonto.
Kodwa kunesishiphi esisamlandela njengoba axoshelwa ukukhuluma kabi ngokudlwengula ngesikhathi ekwi-Odisha FC e-India. Ukuhlukunyezwa nokudlwengulwa kwabesifazane kuwufa oludla lubi e-India, nakhona kuleli.
“Uyafuna ukuthi izinqumo zonompempe zikuvune kwesinye isikhathi, bekumele sithole iphenathi. Sengicabanga ukuthi omunye wabadlali bami kuzodungeka adlwengule noma adlwengule ukuze sithole iphenathi,” washo kanje uBaxter.
Le nkulumo yakhe ayehlanga kahle kwabaningi njengoba yayibonakala ihlekisa ngento ebucayi. Kuzokhumbuleka ukuthi iSAFA yamvimba uLuc Eymael ekutheni asebenze kuleli ngemuva kokusolwa ngenkulumo enehlese yokucwasa ngebala.
U-Eymael wayesebenza eTanzania kwiYoung Africans ngesikhathi efanisa abalandeli bayo nezomfene, ethi into abayaziyo nje wukubanga umsindo. Kuyaxaka ke nokho ukuthi iSAFA ishaye sengathi ayiboni kulokhu kukaBaxter.
“Leyo ndaba (kaStuart Baxter) seyaxazululwa kudala ngesikhathi uStuart Baxter exolisa, wathi wayengaqondile ngale Ndlela eyazwakala ngayo. Inhlangano eyengamele ibhola e-India yaluvala kanjalo ke lolo daba.
“Ngakho ke, ohlangothini lweSAFA, asinankinga,” kusho isikhulu esiphezulu seSAFA, uTebogo Motlanthe. “Uzokhumbula ukuthi nasendabeni kaLuc sathatha izinyathelo ngoba inhlangano eyengamele ibhola eTanzania yasiikela ngalokhu. Bathi nakhu osekwenzekile, uLuc uthe wathi wathi. Basithemelela nobufakazi. I-India ayizange isitshele lutho.”
UBaxter kulindeleke atheleke kuleli kulo leli viki ukuze azoqala umsebenzi wakhe kwiChiefs. Amakhosi axoshe uGavin Hunt ngoLwesihlanu olwedlule. Kuzobe kubambe u-Arthur Zwane noDillon Shepard uma seyibhekene neGolden Arrows ngoLwesithathu ntambama.
Previous Previous post: Uzitholele abadlali azobasebenzisa kwiDStv Diski Challenge oweRoyal AM eMsinga
Next Next post: Ukuwina kuphela okubusa umqondo kaZwane ohola iChiefs empini yokugcina